ဆေးဖကျဝငျတဲ့ ပဉျြးတျောသိမျ - Achawlaymyar
ရုက်ခဗဒေ အမညျ – Clausena excavata Burm.
စာဖတျသူတှေ အနနေဲ့တော့ ပြဥျးတျောသိမျနဲ့ စိမျးကွမယျလို့ မထငျပါဘူး။ ပြဥျးတျောသိမျဟာ အပငျငယျတဈမြိုး ဖွဈပွီး ၁၀ ပေ ဝနျးကငျြလောကျအထိ ကွီးထှားနိုငျပါတယျ။ အာရှဒသေမှာရှိတဲ့ နိုငျငံအမြားစုမှာ ပေါကျရောကျတဲ့ အပငျဖွဈပါတယျ။ သွစတွေးလနြဲ့ အာဖရိကဒသေ အခြို့မှာလညျး ပေါကျရောကျပွီး ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ နရောဒသေ တျောတျောမြားမြားမှာ တှရေ့တဲ့ အပငျဖွဈပါတယျ။ အပငျမှာ အဓိကအသုံးပွုရတဲ့ အစိတျအပိုငျးကတော့ အရှကျဖွဈပွီး ဟငျးခကျြရာမှာ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျအဖွဈနဲ့ ထညျ့သှငျး အသုံးပွုကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အသားဟငျးတှေ၊ ပဲဟငျးနဲ့ သားသတျလှတျဟငျးလြာတှထေဲမှာ ထညျ့သှငျးခကျြပွုတျလရှေိ့ပါတယျ။
ပြဥျးတျောသိမျရဲ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မိသားစုထဲမှာ ကြောကျကပျရောဂါရှိသူတှအေနနေဲ့ ကွိုတငျကာကှယျနိုငျဖို့ ပဉျြးတျောသိမျအရှကျကို စားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ နစေ့ဉျစားသုံးတဲ့အစားအသောကျတှထေဲမှာ ပဉျြးတျောသိမျရှကျကိုထညျ့သှငျးစားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ကြောကျကပျရောဂါကငျးဝေးစမှော ဖွဈပါတယျ။
၂။ ဝမျးလြှောတာကို သကျသာစခွေငျး
ပဉျြးတျောသိမျက ဝမျးလြှောတာကို သကျသာစတေဲ့ သဘာဝဆေးဖကျဝငျအပငျတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ပဉျြးတျောသိမျရှကျမှာ ဝမျးလြှောတာကို သကျသာစနေိုငျတဲ့ carbazole alkaloids ဆိုတဲ့ ဓာတျတဈမြိုး ပါဝငျပါတယျ။
ပဉျြးတျောသိမျအရှကျကို သံပုရာရညျ၊ သကွားတို့နဲ့ဖြျောစပျပွီး သောကျသုံးမယျဆိုရငျ အစာမကွတောနဲ့ မအီမသာဖွဈတာတှကေို သကျသာစမှောဖွဈပါတယျ။
အစားအသောကျတှထေဲမှာ ပဉျြးတျောသိမျအရှကျကိုထညျ့သှငျးစားသုံးမယျဆိုရငျ အမွငျအာရုံကို ကောငျးမှနျစမှောဖွဈပါတယျ။ မကျြစိရတေိမျမဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ပဉျြးတျောသိမျအရှကျက ဆံပငျကိုနကျမှောငျသနျစှမျးစပွေီး ဆံသားကို ကနျြးမာသနျစှမျးစပေါတယျ။ အုနျးဆီနဲ့ရောပွီးလူးပေးနိုငျပါတယျ။ ပဉျြးတျောသိမျက အရှယျမတိုငျခငျ ဆံပငျဖွူတာမြိုးမဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
ပဉျြးတျောသိမျအရှကျစားသုံးပေးခွငျးက ကိုယျတှငျးမှာ မလိုအပျတဲ့ ကိုလကျစထရောတှကေို ထိနျးခြုပျပေးပွီး အဆီပိုကငျးတဲ့ ခန်ဓါကိုယျကိုပိုငျဆိုငျနိုငျစမှောဖွဈပါတယျ။
၇။ ဆီးခြို ကိုထိနျးညှိပေးခွငျး
ပဉျြးတျောသိမျရှကျက ဆီးခြိုဝဒေနာသညျတှအေတှကျအထူးသငျ့တျောတဲ့ဆေးဖကျဝငျအရှကျတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ သှေးတှငျးအခြိုဓါတျကို ထိနျးညှိပေးပါတယျ။
၈။ အသညျးကို ကနျြးမာစခွေငျး
ပဉျြးတျောသိမျမှာ annins နဲ့ carbazole alkaloid တှပေါဝငျနတောကွောငျ့ အသညျးမပကျြစီးအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ အသညျးရောငျအသားဝါရောဂါ၊ အသညျးရှတျနာတို့လိုမြိုး ရောဂါတှမေဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
၉။ အရပွေားကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုခွငျး
ပဉျြးတျောသိမျအရှကျ ကွိတျထားတဲ့အနှဈကို အပူလောငျနာ၊ ပွတျရှဒဏျရာ၊ အရပွေားပျေါမှာ စပျဖဉျြးဖဉျြးဖွဈတာ၊ အငျးဆကျပိုးမှားတှကေိုကျတဲ့ ဒဏျရာတှပေျေါမှာ အသုံးပွုပေးမယျဆိုရငျ အနာကကျြမွနျမွနျကကျြစမှောဖွဈသလို အနာကိုပိုးမဝငျအောငျလညျးအထောကျအကူဖွဈစမှောဖွဈပါတယျ။
ဇငျထူးနိုငျ မှ ရေးသား
ရုက္ခဗေဒ အမည် – Clausena excavata Burm.
စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့တော့ ပျဉ်းတော်သိမ်နဲ့ စိမ်းကြမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ပျဉ်းတော်သိမ်ဟာ အပင်ငယ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ၁၀ ပေ ဝန်းကျင်လောက်အထိ ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ အာရှဒေသမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံအများစုမှာ ပေါက်ရောက်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနဲ့ အာဖရိကဒေသ အချို့မှာလည်း ပေါက်ရောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နေရာဒေသ တော်တော်များများမှာ တွေ့ရတဲ့ အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်မှာ အဓိကအသုံးပြုရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ အရွက်ဖြစ်ပြီး ဟင်းချက်ရာမှာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်နဲ့ ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသားဟင်းတွေ၊ ပဲဟင်းနဲ့ သားသတ်လွတ်ဟင်းလျာတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ပျဉ်းတော်သိမ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မိသားစုထဲမှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပျဉ်းတော်သိမ်အရွက်ကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်ကိုထည့်သွင်းစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါကင်းဝေးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဝမ်းလျှောတာကို သက်သာစေခြင်း
ပျဉ်းတော်သိမ်က ဝမ်းလျှောတာကို သက်သာစေတဲ့ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်မှာ ဝမ်းလျှောတာကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ carbazole alkaloids ဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
ပျဉ်းတော်သိမ်အရွက်ကို သံပုရာရည်၊ သကြားတို့နဲ့ဖျော်စပ်ပြီး သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် အစာမကြေတာနဲ့ မအီမသာဖြစ်တာတွေကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေထဲမှာ ပျဉ်းတော်သိမ်အရွက်ကိုထည့်သွင်းစားသုံးမယ်ဆိုရင် အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိရေတိမ်မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပျဉ်းတော်သိမ်အရွက်က ဆံပင်ကိုနက်မှောင်သန်စွမ်းစေပြီး ဆံသားကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ အုန်းဆီနဲ့ရောပြီးလူးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပျဉ်းတော်သိမ်က အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ပျဉ်းတော်သိမ်အရွက်စားသုံးပေးခြင်းက ကိုယ်တွင်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ ကိုလက်စထရောတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး အဆီပိုကင်းတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ဆီးချို ကိုထိန်းညှိပေးခြင်း
ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်က ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေအတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ဆေးဖက်ဝင်အရွက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းအချိုဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
၈။ အသည်းကို ကျန်းမာစေခြင်း
ပျဉ်းတော်သိမ်မှာ annins နဲ့ carbazole alkaloid တွေပါဝင်နေတာကြောင့် အသည်းမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ၊ အသည်းရွတ်နာတို့လိုမျိုး ရောဂါတွေမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၉။ အရေပြားကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်း
ပျဉ်းတော်သိမ်အရွက် ကြိတ်ထားတဲ့အနှစ်ကို အပူလောင်နာ၊ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ အရေပြားပေါ်မှာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေပေါ်မှာ အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် အနာကျက်မြန်မြန်ကျက်စေမှာဖြစ်သလို အနာကိုပိုးမဝင်အောင်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇင်ထူးနိုင် မှ ရေးသား
နှဈခါ ပွနျမရတဲ့ အပြိုစငျဘဝလေးကို တနျဖိုးထားပါ
အရမျးခဈြတတျပမေဲ့ အခဈြရေးကံမကောငျးရတဲ့ အကွောငျးရငျးမှာ…